Ujyaalo Sandesh | » यो मन कहाँ दुख्छ ? यो मन कहाँ दुख्छ ? – Ujyaalo Sandesh
यो मन कहाँ दुख्छ ?
अनिल श्रेष्ठ, (काठमाण्डौं)
म चुपचाप उनलाई हेरेर टोलाइरहन्छु । उनी दुविधापूर्वक मलाई हेरेरै टोलाइरहन्छिन् । र, फेरि सोध्छिन्, ‘सन्चो लाग्या छैन ?’ तर मेरो छेउमै उभिएको उनको त्यो उपस्थितिसँग भने म बेसरोकार छु । उनका ती प्रश्नहरूले मलाई छुँदैन । मेरो यो मौन व्यवहारले उनी अचम्म मानेर फेरि पनि मलाई नियालिरहन्छिन् । म उनको आँखा र निधारभरि उठिरहेको उनको त्यो असामन्जस्य, चिन्ता र छटपटीहरूलाई हेरिरहन्छु । र, निस्फिक्री छु । म आफ्नै मनसँग एकान्तमा छु । मनको एउटा लयमा छु । मनसँग एकालापमा छु । र, बेफिक्री छु ।
उनी एकै छिन अलमल्ल परिन् र लजालु भावले मलाई हेरिरहिन् ।
म घोत्लिएको छु निकै दिनदेखि आफ्नो मनसँग । दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, उत्साह, निराशा, छटपटी, वेदना मान्छेको मनसँग गाँसिएर कसरी आउँछ ? मान्छेभित्र यो कसरी उब्जन्छ ? विचारहरूको तरंगले शरीरमा ल्याउने प्रभाव हो सायद मन । मेरा घोत्ल्याइँहरू बाँकी छन् अझै । म भने अरुणा लामाको सुमधुर आवाजमा राजेन्द्र थापाको गीतलाई गुन्गुनाइरहेको छु यतिखेर
केले सिउने, केले टाल्ने हो !’ कान्तिपुरबाट